Wall wall ye iMac inosvika 27 inches | Ndinobva mac
El IMac yagara iri komputa ine mazana ezviuru zvevanhu pamadhesiki avo. Izvo zvinopfuura zvakaratidza kuti Apple's-in-one pfungwa yakatokundwa kubva kune apfuura mamodheru uye kwemakore mazhinji Pfungwa yekumira iyo iMac parizvino yakagadzwa kuti ikwanise kuzviriritira.
Zvino, pane dzimwe nguva dzinoenderana nekumisikidzwa kwenzvimbo yebasa kwaunoda kushandisa komputa kana nekuti iwe uchingoda kuve nayo sechiyero chemadziro, zvinodikanwa kushandisa zvitsigiso kuti ugone kuisimbisa.
Apple yakagadzirira timu iyi nenzira yekuti nematanho mashoma akareruka tinogona kusunungura tsoka yeMac kuti tikwanise kuisanganisa uye kunamatira akasiyana masisitimu esimbi chero bedzi ivo vachitevedzera iyo VESA standard. Muchikamu chino tinokuratidza a sarudzo nyowani yandakanga ndisati ndamboona pamambure uye ndakawana ichifadza kuti vaverengi vedu vazive nezvayo.
Iko kutsigira kweiyo muchiso Brateck iyo ine imwecheteyo nzira yekumisikidza kune iMac seye komputa yega base. Nekudaro, nekukatanura rutsoka rweMac uye nekuzoisa ino sisitimu nezvikwiriso zvakafanana, isu tinowana rutsigiro Neiyo yekumisikidza iyo iMac kune chero imwe mhando yerusvingo inokwira.
Iyo inogadzira inoshuma kuti inoenderana neazvino 21'5 uye 27 iMac, neApple cinema Ratidza, neiyo Thunderbolt skrini kana kunyangwe neyakare 24-inch iMac. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve rutsigiro urwu, unogona kushanyira iyo next link. Mutengo wacho ndewe 19,98 euros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » IMac » Wall wall ye iMac inosvika 27 inches
Takura yako Macbook nePadad semachinda echokwadi